ग्रेटर अत्तरिया टाउन मेरो सपना « Anumodan National Daily
सुनीलकुमार भण्डारी नेपाली काँग्रेसका स्थापित नेता हुनुहुन्छ । २००५ सालमा डोटीको निरौलीमा कुलानन्द भण्डारी र आमा दुर्गादेवी भण्डारीको कोखबाट जन्मिनुभएका उहाँको राजनीतिक यात्रा २०२४ सालबाट शुरु भएको हो । स्नातक तह उत्तीर्ण भण्डारी पहिलो पटक २०२६ सालमा जेल पर्नु भएको थियो । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य रहिसकेका उहाँ नेपाल परिवार नियोजन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको छ । ४८ वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय उहाँले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । ‘म जीवनभरी निष्ठाको राजनीतिमा सक्रिय रहे’ चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त उहाँले आइतबार अनुमोदनसंगको फोनवार्तामा भन्नुभयो– म कुनै पनि अवस्थामा कहिल्यै पनि आफ्नो सिद्धान्त र मूल्यमान्यताप्रति विचलित भइन । ७० वर्षको उमेर पुग्न लाग्दा बल्ल प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने अवसर पाउनु भएका भण्डारीको सपना छ– ग्रेटर अत्तरिया टाउन डेभलपमेन्ट । ‘एउटा यस्तो शहर जो विश्व स्तरीय होस्’ उहाँले भन्नुभयो– यस क्षेत्रका जनताको विश्वास प्राप्त गरे भने म मेरो यो सपना साकार बनाउने छु । उहाँसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप:
कैलाली क्षेत्र नम्बर ४
चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ, मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
– मैले जीवनको उत्तरार्धमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने अवसर पाए । यसलाई यस क्षेत्रका आम जनताले पनि ‘निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिको उम्मेदवारी’ का रूपमा लिनु भएको पाए । युवा र पछिल्लो पुस्ताका लागि म नौलो व्यक्ति हुला, तर चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा मैले हरेक ठाउँमा जुन उत्साहजनक समर्थन पाए, त्यसले मैले आफ्नो उम्मेदवारी सार्थक भएको ठानेको छु । यो क्षेत्रका हरेक वडा, टोल, वस्तीमा पार्टीका नेताकार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको स्वत:स्फूर्त सभागिता देखेर म निकै हौसिएको छु । हेर्नोस्, चुनावमा जबसम्म आम कार्यकर्ता र जनतामा जोशजाँगर आउँदैन, चुनाव जितेर पनि फिक्का हुन्छ । चुनाव जित्ने आधार नै आम कार्यकर्ता र जनताको जोशपूर्ण समर्थन हो ।
तपाईका प्रमुख चुनावी एजेण्डा के के छन् ?
– चुनावी प्रचारप्रसारको शिलशिलामा मैले जनताको पिरमर्का बुझ्ने अवसर पाएको छु । धेरैबाट विकासको आवाज उठेका छन् । खानेपानी, शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य, बिजुली, मुक्तकमैया, सुकुम्बासीका समस्या, नदीकटान, बाढी नियन्त्रण, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका प्रमुख एजेण्डा हुन् । हामी तराई र पहाडलाई जोडेर नेपालकै नमुनाको ‘तराई–पहाड रिङरोड’को निर्माण गर्दैछौं । यो क्षेत्रभरी सडक सञ्जाल विस्तार गर्दैछौं । गुणस्तरीय र नि:शुल्क शिक्षा अर्का प्राथमकिता हुन् । हामीले चुनावमा विजय भएपछि के गर्छौ भन्ने हामीले जनतामाझ सविस्तार प्रस्तुत गरिसकेका छौं । अहिले म एउटा मेरो एउटा प्रवल सपना र योजनाबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । यो ‘ग्रेटर अत्तरिया टाउन डेचलपमेन्ट’ अर्थात् विशाल अत्तरिया शहर विकास परियोजना हो । यस्तो शहर जो विश्वका विकशित देशका शहरसँग दाज्न मिलोस् । एउटा यस्तो अत्याधुनिक तथा समृद्ध र सुसंकृत शहर जहाँ प्रत्यक नागरिकले आफू त्यहाँको वासिन्दा भएकोमा गर्व गर्न सकुन् । व्यवस्थित बजार र बसोबास, व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र, सिटि हल, मनोरञ्जन स्थल, बाल उद्यान तथा पार्क, सिनेमाघर, आधुनिक बस पार्क, चार लेन सडक, पार्कस्थल, व्यवस्थित ढल निकास र डम्पिङसाइट, सुरक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध, नगरभित्र चौबिसै घन्टा यातायात सुविधा, अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल, नमुनायोग्य कलेज सहितको शहर मेरो कल्पना हो । सबैले भन्लान्– के यस्तो शहर सम्भव छ । म भन्छु– सम्भव छ । यो अठोटको कुरा हो । मेरो जीवनको एउटा सपना हो, जो म यस क्षेत्रका जनताको विश्वास र समर्थनबाट पुरा गर्नेछु ।
तपाईका यी एजेण्डाप्रति जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
– अत्यन्त राम्रो छ । जनता हामीप्रति उत्साहित छन् । नेपाली काँग्रेसको नीति र सिद्धान्त, लोकतन्त्रप्रतिको अटुट निष्ठा, जनता माझ हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धता तथा यस क्षेत्रको लागि लामो समयदेखि गरेको निष्ठाबान सेवाका कारण माहोल अत्यन्त उत्साजनक छ । मैले नेपाली काँग्रेसमा लामो समयदेखिको सेवा, यस क्षेत्रका आदरणीय जनताको म प्रतिको विश्वास, पार्टीको एजेण्डा र पार्टीको इतिहास जस्तै, तत्कालीन विद्रोही माओबादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन खेलेको भूमिका, संविधान सभाको निर्वाचनसँगै संविधान बनाउन खेलेको भूमिका, सदूरपश्चिममा विकासका लागि नेपाली काँग्रेसले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण काँग्रेसका प्रति जनताको उत्साह चरममा पुगेको मैले अनुभव गरेको छु ।
मंसिर १८ गते (epaper)